के तपाइले आँफुले आँफुलाइ हिन्दु भन्नुहुन्छ ? हिन्दु हुनुका गुण के के हुन? – नेपालि भिडियो ब्लग, पहिलो र एक मात्र
तर, यि बुँदाले अर्को प्रश्न जन्माएको छ : के म साँच्चिकै हिन्दु हुँ त ?
यदि यि सबै बुँदाको अक्षरस: पालना गर्नु पर्ने हो भने म हिन्दु रहँदिन ! किनकि, म इश्वरको प्रतिमा स्थापना गरेर पुजा गर्दिन, मलाइ पुनर्जन्ममा बिश्वास छैन, आत्मा अमर हो भन्नेमा पनि शंका छ, गाइलाइ पुजा गर्दिन, तिर्थयात्रामा पनि कुनै चाख छैन !
त्यसो भए के म हिन्दु होइन? बुँदाले प्रमाणित नभए पनि, म हिन्दु होइन भन्न चाँहि मिल्दैन।
मेरो बिचारमा बुँदा नम्बर १, २, १० सबै देविदेवताका कुरा हुन । हिन्दुहरुका देवताहरु कल्पनाबाट भन्दा पनि बढि प्रकृतिबाट नै लिइएका छन । जस्तो कि इन्द्र पानि पार्ने देवता हुन भने हात्तिलाइ गणेश मानिन्छ, जो मुसोलाइ बहान बनाएर चढ्छन। सुर्यदेव, चन्द्रमा, पृथ्वि सबै हाम्रा देवता हुन । हामि काग पुज्छौं, कुकुर पुज्छौं, गाइ हाम्रि लक्ष्मि देवि हुन भने, राँगो महिशासुर दानव । दशैंमा दानवको बध गरेर त्यसको मासु खाइन्छ।
तेसैले, देविदेवताको भन्दा पनि हिन्दुहरु “प्रकृति को पुजा गर्छन” जस्तो लाग्छ मलाइ । तिनै प्राकृतिक चिजबिजको प्रतिमा स्थापना गर्छन र पुजा गर्छन । तिनै प्रतिमाको दर्शन गर्न तिर्थ यात्र पनि जान्छन । यि सबै प्रकृति पुजाका रुपहरु मात्रै हुन ।
बुँदा ४ – पुनर्जन्म कथाका बिषयबस्तु हुन। खराव काम गरेमा देवताले सजाय दिन्छन भन्ने कुरालाइ प्रष्ट पार्न पुनर्जनमको सहारा लिइएको हो । बिष्णु भगवान मानिसको रुपमा अवतार लिएर खराव आचरण भएका मानिसहरुको नाश गर्छन भनेर मानिसहरुलाइ खराव नहुन प्रेरित गर्ने र खरावलाइ सजाय पाउंछन भनेर ढुक्क बनाउन यि पुनर्जन्म कथा बनाइएका हुन । तेसैले धार्मिक हिन्दुले पुनर्जन्ममा बिश्वार गर्नै पर्ने देखिन्छ ।
(अरु बिश्लेषण फुर्सदमा)
This entry was posted in चिन्तन. Bookmark the permalink.
← प्रशुमा राइ को कविता “पेट”
खोला तार्नुको मज्जा, प्रकटको रोमान्टिक गजल →